ငူငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ငူငှက် Pompadour Green Pigeon
Male of the nominate subspecies in the Kaudulla National Park, Sri Lanka.
ငူသည် ခို၊ချိုးငှက်တို့နှင့်အတူ 'ကိုလံဗီဒီ'မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ငူ၌ စိမ်းစိုသော အမွေးအတောင်များ ရှိ၏။ ငူအမျိုးပေါင်း များပြားသဖြင့် တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးကို ခွဲခြား၍ သိရန်မှာ မလွယ်ကူချေ။ အထူးသဖြင့် ငူအမများကို အမျိုးခွဲခြား သိရန်မှာ သာ၍ပင် ခက်ခဲသည်။
ငူတို့သည် အအုပ်အသင်းနှင့် နေတတ်ကြသည်။ ညောင်ပင်များ၌ များသောအားဖြင့် ကျက်စားတတ်ကြသည်။ သစ်ပင်ထက်၌ နားနေကြစဉ် သစ်ရွက်စိမ်းများနှင့် ခွဲခြား၍ မရနိုင်ပေ။ လေချွန်သံဖြင့် အော်မြည်ကြသောအခါမှ ယင်းတို့ ရှိမှန်းကို သိကြရသည်။ ငူ၏ ကိုယ်အရှည်အလျားမှာ ၁ဝ လက်မ၊ ၁၂ လက်မခန့် ရှိသည်။ ကိုယ်၏ အလုံးအထည်မှာ အလျားနှင့် လိုက်လျောစွာ ရှိသဖြင့် ကြည့်၍ကောင်းသော ငှက်မျိုး ဖြစ် လေသည်။ ထိုငှက်၏ခြေများသည် သစ်ပင်တက်နိုင်ရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်၍ သန်စွမ်း၏။
ငူတို့တွင် ခြေဝါငူ၊ ရင်ပတ်ဝါငူ၊ နှုတ်သီးထူငူ စသည်ဖြင့် ငူအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ ယင်းတို့ကို နီပေါနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုချိုင်းနား၊ မလေးရှားကျွန်းဆွယ်၊ ဂျာဗားကျွန်းတို့၌ တွေ့ရသည်။ 
T. p. phayrei (male above, female below)
T. p. aromatica (male in foreground, female behind)
T. p. axillaris (male in foreground, female behind)
T. p. pompadora (male)
↑ Treron pompadora။ IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4။ International Union for Conservation of Nature (2009)။ 18 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငူငှက်&oldid=410443" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၂:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။